CNC aluminum akụkụ
Ngwa nke nkpuchi igwe electromagnetic ipigide njirimara ya na oru ya
Njirimara arụmọrụ na ụkpụrụ ọrụ nke njigide electromagnetic nke ngwa nke igwe nkpuchi. Igwe electromagnetic bụ ngwa mmepụta ihe dị mkpa nke igwe nkpuchi. A ọma akpa ipigide nwere ike melite na-arụ ọrụ arụmọrụ nke nkpuchi igwe na ...
Atụmatụ na atụmanya nke nkenke Machinery Parts nhazi
The nkenke machining ụlọ ọrụ mgbe niile a oru-kpụ ọkụ n'ọnụ, isi obodo-kpụ ọkụ n'ọnụ, na technology-kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ ọrụ. Ulo oru nwere oke uzo. Ọbụna ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ izugbe erughị ogo ụfọdụ, ọ ga-esiri ike ị nweta uru. Nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike belata ụgwọ nke ...
Gịnị bụ akụkụ kwesịrị ekwesị n'ihi na nkenke machining
Anyị maara na nkenke nhazi nwere nnukwu ihe achọrọ maka nkenke, nkenke nkenke nwere ezigbo nkwụsi ike, nkenke nrụpụta dị elu, na nhazi ngwa ọrụ ziri ezi, yabụ ọ nwere ike ịhazi akụkụ nwere oke nkenke chọrọ. Ya mere, olee akụkụ ndị kwesịrị ekwesị maka nkenke machining? Ndị na-esonụ bụ ...
No.16, Dalong Road, Shigu Industrial Mpaghara, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China
Soro anyị na netwọk mmekọrịta ndị a.
Right Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara.